नेपाल आज | नगरपालिकाको निर्णयः पानीपुरी र चटपट बिक्रीमा प्रतिवन्ध, मद्यपान–धूमपान खुला !
नगरपालिकाको निर्णयः पानीपुरी र चटपट बिक्रीमा प्रतिवन्ध, मद्यपान–धूमपान खुला !
काठमाडौं । बागलुङ नगरपालिकामा धूमपान र मद्यपान जहीँत्यहीँ पाउँछ । तर, अब पानीपुरी र चटपट भने पाउनै पुस्किल भएको छ । नगरपालिकाले नै पानीपुरी र चटपट बिक्री गर्न प्रतिवन्ध लगाएपछि त्यसको अभाव भएको हो ।
नगरपालिकाले नगरसभाबाटै पानीपुरी र चटपट बिक्री कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने भन्दै निर्णय गरेर अहिले कार्यान्वयनमासमेत ल्याइसकेको छ ।
नगरपालिकाको यो निर्णयबारे नागरिकका मिश्रीत प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । धेरै व्यक्तिले यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले के पानीपुरी र चटपटले मात्रै स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ ? भन्दै नगरपालिकालाई प्रश्न गरेका छन् ।
नगरपालिकाको यो निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दै अधिकांश व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाइरहेका छन् । तर, नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने पानीपुरी र चटपटमा स्वास्थ्यलाई असाध्यै हानिकारक पदार्थ मिश्रण गरिएको भेटिएकाले प्रतिवन्ध नै लगाउनु परेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने पदार्थ नमिसाएर व्यापार गर्नस् भनेर पटक-पटक सचेत गरायौं तर व्यवसायीहरुले मान्नु भएन । बाध्य भएर प्रतिवन्ध नै लगाउनु परेको हो ।’
पानीपुरी र चटपटलाई प्रतिवन्ध तर मदिरा, चुरोटलगायतमा चाहीँ किन बिक्री वितरण ? यो प्रश्नमा नगरप्रमुख पौडेलले भने, ‘हामीले यो कार्य (मदिरा, धूमपान) पनि नियन्त्रण र प्रतिवन्धको तयारी गरिरहेका छौं । हामीले पानीपुरी र चटपटेलाई प्रतिवन्ध गर्नुलाई अभियान सुरुवात हुँदैछ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । पानीपुरी र चटपटे प्रतिवन्ध हुने तर मदिरा लगायत स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने पदार्थ प्रतिवन्ध हुँदैनन् भन्ने होइन । विस्तारै मदिरा, बीडीँ, चरोटलगायत मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने तत्वलाई पनि प्रतिवन्ध र नियन्त्रण गर्ने अभियान सुरुवात गर्दै छौं ।’
नगरपालिकाको यो निर्णयले पानीपुरी र चटपटे व्यापार गरी जीवनगुजरा चलाउने व्यक्तिलाई अहिले त्यहाँ समस्या भइरहेको छ । कतिपयले त्यो व्यापार त्यागेर विकल्प खोजे पनि धेरैले रित्तो हात बस्नु परिरहेको छ । नगरप्रमुख पौडेलले यदि आर्थिक स्थिती कमजोर भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई हार्थिक सहायता गर्न सकिने बताए ।
‘प्रतिवन्धपछि पानीपुरी र चटपटे व्यापारीलाई केही समस्या भएको हुनसक्छ, समस्या छ भन्दैमा अब यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनूमति दिइन्न । बरु, नगरपालिकाले कमजोर आर्थिक स्थिती भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्नसक्छ ।’ मेयर वडले भने ।
नगरपालिकाले पानीपुरी र चटपट बिक्रीमा गर्ने कार्यमा असार मसान्तमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यद्यपी, कार्यान्वयन भने कैही महिना अघिदेखि मात्रै सुरु भएको छ ।